लिनक्समा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने? | लिनक्सबाट
लिनक्समा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
टेलीग्राम मेसेन्जर एक द्रुत सन्देश अनुप्रयोग हो पाठ र मल्टिमेडिया सन्देशहरू पठाउन र प्राप्तमा केन्द्रित। सुरुमा यो सेवा मोबाइल फोनको लागि प्रयोग गरियो र अर्को वर्ष बहु प्लेटफर्मको लागि १० भन्दा बढी अपरेटिंग प्रणालीहरूको लागि उपलब्ध: एन्ड्रोइड, आईओएस, म्याकोस, विन्डोज, जीएनयू / लिनक्स, फायरफक्स ओएस, वेब ब्राउजरहरू, अन्यहरू बीच।
entre यसको मुख्य विशेषताहरु हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं ऐतिहासिक सामग्री होस्टिंग एकीकृत, and र कुराकानीबाट सामग्री बचत गर्ने क्षमता, १. GB जीबी सम्म फाईलहरू, कागजातहरू, मल्टिमेडिया र ग्राफिक एनिमेसनहरू, ग्लोबल सामग्री खोजी सहित, सम्पर्क पुस्तक, कलहरू, प्रसारण च्यानलहरू, सुपरग्रुपहरू, र अन्यहरू।
तार MTProto टेक्नोलोजीको साथ तपाईंको पूर्वाधार प्रयोग गर्नुहोस्। आधारभूत सुविधाहरूको साथसाथै, यसले बोट प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ जुन बुद्धिमान कुराकानी गर्नका साथै अन्य सेवाहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ र कुराकानीमा अनुभव पूरक हुन्छ।
लिनक्समा टेलिग्राम स्थापना गर्न हामीसँग धेरै सरल स्थापना विधिहरू छन् जुन हामी आफ्नो डेस्कटपको सुविधाबाट अनुप्रयोगको आनन्द लिन सक्छौं।
1 उबुन्टु १.18.04.०XNUMX र डेरिभेटिभमा कसरी टेलिग्राम स्थापना गर्ने?
2 डेबियन सिडमा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
3 फेडोरा २ and र डेरिभेटिभमा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
4 आर्च लिनक्स र डेरिभेटिभमा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
5 स्न्यापबाट टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
6 Flatpak बाट Telegram कसरी स्थापना गर्ने?
7 लिनक्सबाट टेलिग्राम कसरी स्थापना हटाउने?
उबुन्टु १.18.04.०XNUMX र डेरिभेटिभमा कसरी टेलिग्राम स्थापना गर्ने?
आधिकारिक रूपमा उबुन्टु रिपोजिटरीहरू भित्र टेलिग्रामको लागि कुनै अनुप्रयोग छैन किनकि यसको टेलिग्राम विकासकर्ताहरूले सामान्य जेनेरिक बाइनरी फाईल प्रस्ताव गर्न रुचाउँछन्।
यसैले हामी अनुप्रयोग स्थापना गर्न तेस्रो-पक्ष रिपोजिटरी समर्थन गर्दछौं। हामीले टर्मिनल खोल्नु पर्छ र निम्न आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ:
अब भयो हामी भण्डारहरू अपडेट गर्छौं र यससँग अनुप्रयोग स्थापना गर्दछौं:
डेबियन सिडमा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
केवल डेबियनको यस संस्करणको लागि हामीसंग आधिकारिक भण्डारहरू भित्र स्थापना छ, स्थापनाको लागि मात्र हामीले टर्मिनलमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ:
तर के हुन्छ पुरानो संस्करणहरूको लागि, चिन्ता नगर हामी स्न्याप र फ्ल्याटप्याकबाट टेलिग्राम स्थापना गर्न सक्दछौं तल म यसको लागि आदेशहरू साझा गर्दछु।
फेडोरा २ and र डेरिभेटिभमा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
यस अवस्थामा फेडोरा र यसका डेरिभेटिभहरू, हामी यो अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्छौं cRPMFusion भण्डार मद्दतमा, जो यो आवश्यक छ कि तपाईं यो स्थापित र आफ्नो प्रणाली मा सक्षम छ।
यसलाई स्थापना गर्न तलको कमाण्ड मात्र चलाउनुहोस्:
आर्च लिनक्स र डेरिभेटिभमा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
आर्च लिनक्स केसको लागि, हामीसँग दुई प्याकेजहरू छन् भित्रe AUR भण्डारहरू टेलिग्राम-डेस्कटप-बिन र प्याकेज टेलिग्राम-डेस्कटप-गितमूल रूपमा तिनीहरू मध्ये कुनै एकसँग तपाईंले अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुभयो।
यद्यपि सिफारिश बिन हो किनकि यो सधैं टेलिग्राम विकासकर्ताहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको प्याकेजबाट सिधै भर्खरको संस्करण लिन्छ, यसका साथै यदि तपाईं गीता कम्पालि गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईं मेरो परिप्रेक्ष्यबाट धेरै टाढा हुनुहुनेछ।
तपाईंको स्थापनाको लागि तपाईंले स्थापना गर्नु पर्छ Yaourt तपाईको प्रणालीमा र केवल तपाईंले निम्न आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्छ:
स्न्यापबाट टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
बाँकी वितरण र माथि उल्लिखित पनि हामी स्न्याप प्याकेजबाट अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्छौंहामीसँग केवल यो प्रविधि हाम्रो प्रणालीमा सक्षम गरिएको हुनुपर्दछ।
अहिले हामीले टर्मिनल खोल्नु पर्छ र रन गर्नु पर्छ निम्न आदेश:
Flatpak बाट Telegram कसरी स्थापना गर्ने?
यदि तपाईं स्न्याप मन पराउनुहुन्न वा तपाईं यो सक्षम छैन भने, तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा टेलिग्राम आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ Flatpak को सहायताले, अनुप्रयोग पनि यस्तै प्रकारले। तपाईंले यो टेक्नोलोजी सक्षम गरेको हुनुपर्दछ तपाईंको प्रणालीमा।
El स्थापना कमाण्ड यो हो:
लिनक्सबाट टेलिग्राम कसरी स्थापना हटाउने?
यदि तपाइँ तपाइँको प्रणाली बाट अनुप्रयोग हटाउन चाहानुहुन्छ, तपाईं सफ्टवेयर हटाउने आदेश चलाएर यो गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको प्याकेज प्रणालीबाट, यदि तपाईंले यहाँबाट स्थापना विधिहरू प्रयोग गर्नुभयो भने, म तपाईंको कम्प्युटरबाट टेलिग्राम हटाउन आदेशहरू साझा गर्दछु:
यदि तपाईं स्न्याप संग स्थापना गर्नुभयो:
आर्च लिनक्स र डेरिवेटिवहरूका लागि हामी यसका साथ मेटाउँछौं:
फेडोराको मामलामा, तपाईं यसका साथ स्थापना रद्द गर्नुहोस्:
यदि तपाईंले फ्ल्याटप्याकको साथ अनुप्रयोग स्थापना गर्नुभयो भने:
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » लिनक्समा टेलिग्राम कसरी स्थापना गर्ने?
त्यहाँ टेलिग्राममा यस ब्लगको लागि एक च्यानल छ?
उबुन्टु संस्करण १..१० पछि भण्डारहरूमा आधिकारिक प्याकेज छ:
जोस अल्ज भन्यो
उसले मलाई पेपरमिन्ट १० मा टर्मिनलबाट सेवा गरे, सही ढ working्गले काम गर्दै, बधाई!
JosAlz लाई जवाफ दिनुहोस्
केविन फिगुएरो भन्यो
टेलिग्राम-डेस्कटप प्याकेज आधिकारिक लिनक्स मिन्ट रिपोजिटरीमा उपलब्ध छ, तर यो मिति सकिएको छ। मैले प्रणालीमा भर्खरको संस्करण स्थापना गर्नुपर्दछ, सायद बाइनरी भन्दा उनीहरूले टेलिग्राम वेबसाइटमा दिन्छन्
केविन फिगुएरोलाई जवाफ दिनुहोस्
लिब्रेअफिस .6.0.4.०.। अब 88 XNUMX भन्दा बढि फिक्सहरूसहित उपलब्ध छन्